Tube ho an'ny YouTube azo alaina maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra. | Vaovao IPhone
Tube ho an'ny YouTube azo alaina maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra.
Ny fampiharana YouTube an'i Google dia nihatsara be rehefa mandeha ny fotoana ary afaka milaza izahay fa io no fampiharana tsara indrindra azonay ampiasaina mba hankafizanay ireo horonantsary ankafizinay. Saingy na eo aza izany, ao amin'ny App Store dia afaka mahita rindranasa marobe izay mamela antsika hankafy ireo horonan-tsary ankafizinay manampy ny asany izay mbola tsy ampidirin'ny YouTube amin'ny fomba natoraly, raha tsy jerentsika ny fisintomana horonantsary, izay raha teôria dia tsy misy fampiharana afaka manao azy, farafaharatsiny amin'ny fomba ofisialy. Tube ho an'ny YouTube dia sarany 0,99 euro ao amin'ny App Store, saingy mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana.
Tube for YouTube dia manome antsika interface hafa tanteraka noho ilay natolotry ny fampiharana teratany, interface izay ahafahantsika mitady horonantsary sy playlist hafa. raha milalao horonantsary amin'ny efijery feno izahay. Ho fanampin'izany, noho ny fanaraha-maso fitetezana, afaka miditra haingana amin'ny asan'ny rindranasa isika nefa tsy very eny an-dalana, toy ny mahazatra.
Ity rindranasa ity dia ahafahantsika miditra amin'ny kaonty YouTube anay hahafahanay milalao ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny toerana ankafizinay, ireo fantsona nanoratana anarana ... Izahay koa mamela antsika hisoratra anarana amin'ny fantsona vaovao, manampy horonan-tsary amin'ny tianao na amin'ny lisitry ny horonan-tsary hijery manaraka. Ny fampahalalana momba ny isan'ny fomba fijery sy ny hevitra navoakan'ity horonantsary ity dia azo alaina ihany koa.
Araka ny hitantsika, ity rindranasa ity dia manolotra antsika saika ireo asa mitovy amin'ilay rindranasa teratany, saingy misy interface tsy mitovy amin'ny mahazatra. Raha reraka ianao amin'izany dia efa maimaim-poana izao ity fampiharana ity fotoana tsara hanandramana azy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » Tube ho an'ny YouTube azo alaina maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra.
IPhones efatra amby roapolo no nangalarina tao amin'ny Store Apple's Sol amin'ny alàlan'ny fanaikitra ny tariby
Ny iPhone 8 dia hiverina amin'ny vy sy vera tsy misy fangarony